Vashambadzi Vachashandisa Sei Kuwedzera Kwechokwadi? | Martech Zone
Vashambadzi Vachashandisa Sei Kuwedzera Kwechokwadi?
Mugovera, July 12, 2014 Svondo, Ndira 14, 2018 Douglas Karr
Kufunga kuti mukati memakore gumi anotevera, mota uye nharembozha zvinomisikidzwa zvizere nazvo Augmented reality inonakidza. Ini ndinoshandisa kufambisa kuenda kwese kwese mumotokari yangu uye handikwanise kumirira kusvikira zvinoonekwa zvifambe kubva pachiratidziri chidiki pane yangu mbozhanhare kana iyo yekufambisa screen pamota yangu… kufukidza girazi rangu remhepo iro rinochengeta kutarisa kwangu pakutyaira pane kutarisa kumashure uye mberi. Kubuda kero uye rumwe ruzivo rwakanyanya kunotonhorera kufunga nezvazvo.
Kuwedzera kwechokwadi tekinoroji yedhijitari inoputira zvinyorwa, mifananidzo kana vhidhiyo pamusoro pezvinhu zvinooneka. Pakati payo, AR inopa mhando dzese dzeruzivo senge nzvimbo, kutungamira, kutaridzika, odhiyo uye kumhanyisa data, uye kuvhura nzira yeiyo chaiyo-nguva mhinduro. AR inopa nzira yekuvhara musiyano uripo pakati peiyo chiitiko chemuviri uye nedhijitari, ichipa masimba mabhenji kuti aite zvirinani nevatengi vavo uye kutyaira mhedzisiro yemabhizinesi mukuita.
Kana zviri zvekushambadzira, handina chokwadi chekuti unozoita wakakura musika sekutenda kwakawanda. Ini ndinofunga nezve chaicho chakawedzerwa sekuwedzera kwechiitiko chevashandisi uye zano rekuita, kwete kushambadzira Push turu Semuenzaniso, zvinogona kutonhorera kubva kutsananguro yechigadzirwa mune saiti kana peji kuti unyatso kugona kuona uko chigadzirwa chiripo padyo. Kana kuenda kubva kune ruzivo kuenda kune yekudyidzana kuita. Sezvo iri nyowani, inotonhorera tekinoroji, makambani ari kuisanganisa nhasi ari kuona zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro. Sezvo zvadzinoita kuwanda, ini handina chokwadi chekuti zvichagara. Ndinogona kunge ndakanganisa, zvakadaro.
Imwe bhenefiti yemushandirapamwe uyu ikozvino ndeyekuti iwe unofanirwa kunyoresa kuitira iyo application kuti uone iyo yekuvandudza. Izvi zvinoreva kuti ivo vanoziva kwauri uye kuti ndiwe ani pauri kutarisa iyo AR mushandirapamwe. Download Aurasma ako iOS or Android mudziyo uye unongedze kumufananidzo pazasi nekushandisa kwavo.
Tags: ar kushambadzaAugmented realityaurasmamotokariblippargoogle giraziinnovegakalloc studiochidzitirokushambadzira armetaionokia yeguta lenziqualcomm vuforiarunharekunyudzwa zvachosevuzixwikitudezvappar
Ndeipi Iyo Internet Inotaridzika Kwakaita Mune Inotevera Century?